လူသိနည်းတဲ့ Adele ရဲ့ အကြောင်းလေးတွေ
On April 20, 2018 By fairy
Adele လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ Hello သီချင်းလေးကြားယောင်မိလောက်တဲ့ထိ အောင်မြင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာလဲအောင်မြင်နေဆဲဖြစ်တဲ့ R&B အဆိုတော်ကြီးဆိုတာ လူတိုင်းသိကြမှာပါနော်။ ဒါပေမယ့် တခြားအနုပညာရှင်တွေနဲ့ မတူပဲ အောင်မြင်မှုပေါ်မှာသာယာနေတာမျိုးမရှိပဲ မိသားစုလေးနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနေချင်တဲ့ သူမအကျင့်တွေကြောင့် လူသိနည်းနေမယ်လို့ထင်တဲ့အချက်လေးတွေကို Adele ရဲ့ fan တွေအတွက် ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။
-လက်ရှိအချိန်အထိ album သုံးချပ်သာထွက်ထားဖူးပေမယ့် ဂင်းနစ်ဆုသုံးဆုအပါအဝင် ဆုအမျိုးပေါင်းရာကျော်အောင်ရထားတဲ့ Adele ဟာ အသက်သုံးဆယ်တောင်မပြည့်သေးတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
-သူမရဲ့ နာမည်အရင်းနဲ့ပဲ အနုပညာလောကမှာကျင်လည်ခဲ့ပြီး နာမည်အပြည့်အစုံကတော့ Adele Laurie Blue Adkins ဖြစ်ပါတယ်။ Blue ဟာ သူ့အဖေသိပ်ကြိုက်တဲ့ Blue သီချင်းတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
-May 5, 1988 မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ Adele ဟာ တစ်ဉီးတည်းသောသမီးဖြစ်ပြီး အသက်လေးနှစ်အရွယ်မှာ သူ့မိဘတွေတရားဝင်ကွာရှင်းခဲ့တာကြောင့် အမေနဲ့ပဲ ကြီးပြင်းခဲ့ရသူ ဖြစ်ပါတယ်။
-သူမဟာ လေးနှစ်သမီးကတည်းကနေသီချင်းတွေစဆိုခဲ့ပြီး သီချင်းဖက်ကိုသေချာအာရုံစိုက်နိုင်ဖို့အတွက်အသက်ခြောက်နှစ်အရွယ်မှာ စာဖတ်ခြင်းကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ်။
-သူ့အမေဟာ Adele ရဲ့ဝါသနာကိုအားပေးခဲ့ပြီး သူမကိုအင်္ဂလန်ကနာမည်ကြီး BRIT School for Performing Arts & Technology ကျောင်းမှာထားပေးခဲ့ပါတယ်။
-Adele ဟာ Jessi J, Leona Lewis တို့နဲ့အတန်းဖော်ဖြစ်ခဲ့ပြီး နာမည်ကြီးအဆိုတော်ဖြစ်တဲ့ Amy Winehouse တစ်ယောက်ကလဲ အဲ့ကျောင်းထွက်ဖြစ်ပါတယ်။
-အနုပညာရှင်အများစုဟာ YouTube ကတဆင့်လူသိများကြပေမယ့် Adele ကတော့ ထူးထူးခြားခြား MySpace လို့ခေါ်တဲ့ Social media platform ကတဆင့် အောင်မြင်မှုကို ခြေလှမ်းနိုင်ခဲ့တာပါ။
-Spice Girls နဲ့ Ella Fitzgerald ဟာ ကလေးဘဝကတည်းကသူမကိုတော်တော်လွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ အဆိုတော်တွေဖြစ်ပါတယ်။
-19, 21 နဲ့ 25 စတဲ့ သူမရဲ့ album နာမည်တွေဟာ အဲ့ album ထွက်တုန်းမှာရှိခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ အသက်အတိုင်းပဲ ပေးထားတာပါ။ (ထွေထွေထူးထူးစဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘူးလေ.. ပိုင်ချက် ?)
-သူမရဲ့ သီချင်းအများစုကို သူမကိုယ်တိုင်ရေးသားထားတာဖြစ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်တွေကြောင့် တကယ့်ကို heart ထိစေတဲ့ သီချင်းတွေဖြစ်နေခဲ့တာပါ။
-ပထမဆုံးသူမကိုလူသိများစေခဲ့တဲ့ သီချင်း Chasing Pavement ကို ရည်းစားနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တဲ့ညမှာရေးခဲ့ပြီး Rolling In The Deep ကတော့ သူမရဲ့ ပထမဆုံးရည်းစားနဲ့ပြတ်ခဲ့တဲ့နောက်ရက်မှာရေးခဲ့တာပါ။
-သူမရဲ့ album နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ 19 နဲ့ 21 ဟာ သူမဘယ်တော့မှမပြောပြဘူးခဲ့တဲ့ဘယ်သူမှန်းမသိခဲ့ရတဲ့ အချစ်ဆုံးတစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအများစုပါဝင်နေခဲ့ပါတယ်။
-၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုကို ရည်းစားဟောင်းနဲ့တွေ့ဖို့အတွက် ဖျက်သိမ်းခဲ့ဖူးပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ အဲ့ဒီအတွက် ပရိသတ်ကိုတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။
-သူမရဲ့ album တွေအကုန်လုံးဟာရောင်းအားအကောင်းဆုံးစာရင်းဝင်ခဲ့သလို 21 album ဟာဆိုရင်တော့ UK chart မှာ 21 ပါတ်တိုင်တိုင် ပထမနေရာယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ (စံချိန်တင်တဲ့ဟာတွေရေးရင်တော့ ဆုံးနိုင်တော့မှာမဟုတ်လို့ မရေးတော့ဘူးနော်)
-Adele ဟာ ဘဝတူအနုပညာရှင်တွေနဲ့ date လုပ်ရတာကိုစိတ်မဝင်စားသူဖြစ်သလို တကယ်လဲ ရိုးရိုးစီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်နဲ့ပဲ လက်ထပ်ခဲ့ပြီး Angelo လို့ခေါ်တဲ့ သားလေးတစ်ယောက်ရထားပါတယ်။ သူမဟာသူ့သားလေးနာမည်ကို မွေးပြီးသုံးလကျော်ထိ လျှို့ဝှက်ထားခဲ့ဖူးပါသေးတယ်။
-သူမဟာ ဆေးလိပ်နဲ့အရက်ကိုခုံမင်ခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် ကလေးမွေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ကလေးကိုပိုပြီးဉီးစားပေးချင်တာကြောင့် အရက်သေစာကိုဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
-Adele ဆီမှာတက်တူးငါးခုရှိပေမယ့် ဘယ်တက်တူးကဘာကိုကိုယ်စားပြုတယ်ဆိုတာမျိုး ပရိသတ်ကိုဖော်ပြထားခဲ့ဖူးတာမျိုးမရှိပါဘူး။
-Adele ဟာ အသက် ၃၀ အောက် အနုပညာကြေးအများဆုံးရရှိတဲ့အနုပညာရှင်စာရင်းမှာ နံပါတ်ခြောက်ချိတ်ခဲ့ပါတယ်။ (Forbe’s 2012 စာရင်းအရ)
-သူမဟာ UK ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း Gordon Brown ဆီကနေ fan mail ရခဲ့ဖူးပြီး စီးပွားရေးကျဆင်းနေတဲ့ကာလမှာ သူမရဲ့ သီချင်းတွေကနေတဆင့် ပြည်သူတွေအတွက်အလင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးတွေရေးထားခဲ့တာပါ။
-၂၀၁၃ ခုနှစ်တုန်းကလည်း ဗြိတိန်မင်းသား Charles ကိုယ်တိုင် Adele ကို ဗြိတိန်ရဲ့ အမြင့်ဆုံးဆုဖြစ်တဲ့ MBE (Most Excellent Order of the British Empire) ဆုကိုချီးမြှင့်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
-Adele ဟာ ဟာသဉာဏ်ရွှင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်သလို ဟန်ဆောင်မှုကင်းပြီး ပွင့်လင်းသူတစ်ယောက်အဖြစ်နာမည်ကြီးပါတယ်။
-Adele ရဲ့ Tour tickets ဟာ အမျိုးသမီးအဆိုတော်တွေထဲမှာ အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီး $300~400 ထိရောက်ပါတယ်။
-သူမဟာ တခြားအဆိုတော်တွေလို Tour တွေအများကြီးလုပ်လေ့မရှိပါဘူး။ (အဲ့တာကြောင့်လဲ သူ့လက်မှတ်တွေစျေးကြီးတာဖြစ်နိုင်တယ်နော်)
-နာမည်ကြီးနေတဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် အခုချိန်ထိစင်ကြောက်တတ်သူတစ်ယောက်ပါတဲ့။
-နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ အနုပညာကိစ္စတွေအတွက်ခရီးထွက်ရရင် အိမ်ကိုလွမ်းတတ်သူတစ်ယောက်လဲဖြစ်ပါတယ်။
-သီချင်းတွေကို နားနဲ့ နားဆင်ဖို့အတွက် ဖန်တီးတာပါ။ မျက်လုံးနဲ့ခံစားဖို့ဖန်တီးတာမဟုတ်လို့ သူမရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်ချက်တွေကို ောက်ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုပြီး ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ (ကြမ်းချက်ပဲနော် ?)
အောင်မြင်မှုတွေဘယ်လိုပဲရှိနေပါစေ ဘဝမှာစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ဖို့အတွက် အောင်မြင်မှုနဲ့ မိသားစုကိုမလဲတဲ့ Adele တစ်ယောက်ကို အက်မင်ကတော့ တကယ်ကို အားကျမိပါတယ်။ သိပ်မကြာခင်မှာ အသက်သုံးဆယ်ပြည့်တော့မှာဖြစ်တဲ့ Adele အနေနဲ့ 30 ဆိုတဲ့ Album လေးများထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ အရမ်းကိုပျော်မိမှာမို့လို့ မျှော်လင့်နေမိပါတယ်….?
PREVIOUS POST Previous post: Billboard Music Awards 2018 ရဲ့ ဆန်ခါတင်စာရင်းများထွက်ပေါ်လာ
NEXT POST Next post: Amazon ရဲ့ Best Sellers List မှာ Top ဖြစ်ခဲ့တဲ့ BTS ရဲ့ တတိယမြောက် Album